Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Sudan oo Xaalad Deg Deg Ku Dhawaaqay.
Madaxwaynaha Sudan oo Xaalad Deg Deg Ku Dhawaaqay.
Posted by Dayr	/ February 24, 2019
Madaxweynaha waddanka Sudan, Cumar Xasan al-Bashiir, ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukun deg deg ah, isagoo kala diray xukuumaddii federaalka sidoo kalana xilkii ka qaaday dhammaan barasaabyadii gobollada.
Mr Bashiir ayaa go’aankaasi waxa uu kaga dhawaaqay khudbad laga sii daayay taleefishinka oo qaranka ku socotay, hasayeeshee goor dambe ayaa waxa uu xubno ka tirsan ciidammada ammaanka waxa uu u magacaabay inay barasaabyo noqdaan. Mar sii horraysay, Hay’adda Sirdoonka iyo Ammaanka Qaranka ee Sudan (NISS) ayaa waxa ay sheegtay in Mr Bashiir uu xilka ka degi doono. Mr Bashiir ayaa waxaa diiradda lagu saarayay mudaharaadyo dowladda lagaga soo horjeedo oo dalkaasi muddo todobaadya ah ka dhacayay.
Khudbadda ayuu Mr Bashiir waxa uu ku waydiistay baarlamaanka inuu dib u dhigo isbadelka lagu sameynayo dastuurka taas oo u ogolaan laheyd inuu muddo xileed kale xilka u tartamo. Mr Bashiir ayaa sidoo kale sheegay in mudaharaadyada lagu doonayo in dalka looga mid aan xasiloonayn.
Saacado kaddib markii uu ku dhawaaqay xukunkaasi deg dega ah ayuu Mr Bashiir waxa uu soo saaray laba dikreeto oo uu ku magacaabayo saraakiil ka tirsan milateriga iyo ciidammada ammaanka inay madax ka noqdaan 18-ka gobol ee dalkaasi. Sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in shan ka mid ah golaha wasiirrada ee xilka uu ka qaaday oo uu ay ka mid yihiin, midkii arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo cadaaladda, inay xilalkooda sii haysan doonaan.
Dadka mudaharaadyada soo qabanqaabinayay ayaa waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi donaan ilaa Mr Bashiir uu xilka ka bannaynayo, waxaa sidaasi ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP. Mr Bashiir oo 75-jir ayaa bilowgii hore waxa uu adeegsan jiray erayo ad adag kaddib markii uu ku guulaystay dhowr doorashooyin oo la qabtay tan iyo markii uu awoodda afgambi kula wareegay sanadkii 1989.